ခါးပတ်ရေယုန် (Shingles) ဟာ ရေယုန်လိုမျိုး(Herpes) လိင်မှတဆင့်ကူးစက်နိုင်သောရောဂါလား? - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဇူလိုင် 17, 2018 Anongluck Rattanasirivilai, M.D.
ခါးပတ်ရေယုန်ဆိုတာ Varicella-Zoster (VZV) လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ အရေပြားရောဂါတစ်မျိုးပြီး ရေကျောက်ရောဂါ (Chicekn pox)ကိုဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်အမျိုးတူအုပ်စုဖြစ်သည်။ ခါးပတ်ရေယုန် (Shingles) ဟာ ရေယုန်လိုမျိုး(Herpes) လိုမျိုး လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါမဟုတ်ပါဘူး။ ခါးပတ်ရေယုန်ဟာ ရေကျောက်ပေါက်ဖူးတဲ့လူတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ရေကျောက်ပျောက်သွားတဲ့အခါ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အာရုံကြောဖွဲ့စည်းမှုစနစ်ထဲမှာ ဖုံးကွယ်ပြီးကျန်နေတတ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်ခံအားကျဆင်းချိန်တွင်ပွားများလာတတ်သည်။ Nerve ending အများအပြားရှိတတ်သော အရေပြားလက္ခဏာပြလေ့ရှိသည်။ အများဆုံးကူးစက်ခံရသောအရေပြားဧရိယာတွေကတော့ တင်ပါး၊ မျက်နှာနှင့် ခြေထောက်ပေါ်တွေပဲဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ခံအားနည်းသူတွေနှင့် နေ့စဉ်လိုအပ်သောအခြေခံအနားယူမှုအလုံအလောက်မရှိသူတွေ နို့တိုက်မိခင်တွေနှင့် အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ AIDS ခေါ် ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါဖြစ်နေသူများနှင့် ကင်ဆာရောဂါသည်များတွင်လည်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ Immunosuppressive ဖြစ်သော ဆေးဝါးများနှင့် ကုသနေရသူများ နှင့် စတီးရွိုက်သောက်နေရသူများတွင်လည်း ဖြစ်တတ်ပါသေးသည်။
ပထမ တစ်ရက်ကနေ သုံးရက်အတွင်းတွင် ကြွက်သားနာခြင်း၊ မောပန်းလွယ်ခြင်း၊ အရေပြားပူခြင်း လောင်ခြင်းများဖြစ်စေတတ်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါရောဂါလက္ခဏာခံစားရသူများသည် အရိုးအကြောအထူးကုဆရာဝန်များနှင့်ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံပြီးလျှင် အရေပြားဆရာဝန်များနှင့်ပြသရန် ညွှန်ကြားလေ့ရှိကြသည်။တချို့သူများသည် အရေပြားဧရိယာတွင် အနီရောင်အကွက်များမဖြစ်လာမီ ဖျားနာခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ အနီကွက်များသည် နှစ်ရက်လောက်အတွင်း အရည်ကြည်ဖုများအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပြီး ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားတွင်ပျံ့နှံ့လာသည်။သွေးကြောငယ်များယောင်ယမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။အရည်ကြည်ဖုများသည် တစ်ပတ်မှနှစ်ပတ်အတွင်း အနာဖေးများအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး ထိုအနာဖေးများပျောက်သောအခါနာကျင်လာမှုလျော့နည်းမည်။ အသက်ကြီးသူများနှင့် ကိုယ်ခံအားနည်းသူများတွင် ပို၍ပြင်းထန်တတ်ကြပြီး အချိန်ကြာကြာကုသရလေ့ရှိသည်။
ခါးပတ်ရေယုန်များ မျက်နှာဧရိယာတစ်လျှောက်ပျံ့နှံ့လာပြီး မျက်လုံးအတွင်းသို့ရောက်သွားသောအခါတွင် မျက်ကြည်လွှာ၊ မျက်ဝန်းနှင့် အမြင်အာရုံကြောလေးများယောင်ယမ်းလာပြီး အမြင်အာရုံပျောက်ကွယ်သွားသည်အထိဖြစ်တတ်ပါသည်။ ခါးပတ်ရေယုန်များ နားအရှေ့ပိုင်းဧရိယာအတွင်းပျံ့နှံ့သွားသောအခါတွင်မျက်နှာတစ်ခြမ်း လေဖြတ်နိုင်ပြီး မျက်လုံးတစ်ဖက်ပိတ်မရခြင်း၊ပါးစပ်တစ်ခြမ်းလှုပ်ရှား၍မရခြင်း မျက်ခုံးတစ်ဖက်လှုပ်ရှား၍မရခြင်းတို့ ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။အသက်အရွယ်ကြီးသူများနှင့် AIDS ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူများစသော ကိုယ်ခံအားနည်းနှင့်နေပြီးသောလူနာများတွင် ခါးပတ်ရေယုန်များဟာ သေးငယ်သောအာရုံကြောအဖျားလေးများရှိသောဧရိယာအထိ ပျံ့နှံ့လေရှိသည်။ ထိုအခါတွင် ရောဂါလက္ခဏာများပိုပြင်းထန်၍ အချိန်ကြာစေပြီး ဦးနှောက်နှင့် အခြားသောအတွင်းအင်္ဂါများအထိပျံ့နှံ့ပြီးနောက် အသက်အန္တရာယ်ကိုပင်ခြိမ်းချောက်နိုင်ပါသည်။ ခါးပတ်ရေယုန်သည် ကြောက်စရာကောင်းသောရောဂါအမျိုးအစားပင်ဖြစ်၍ ဤရောဂါမဖြစ်စေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်ပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလျှင် ခါးပတ်ရေယုန်သည် ခန္ဓာကိုယ်၏တစ်နေရာတည်းတွင်သာ ရောဂါလက္ခဏာပြတတ်ပြီး ကိုယ်ခံအားနည်းသူများတွင်သာ ဗိုင်းရပ်စ်များ ပျံ့နှံ့၍ ပေါက်လာတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ထိုသူများသည်ပြင်းထန်သောဝေဒနာများကိုခံစားရရုံသာမက အချိန်တော်တော်ကြာလည်းခံစားရတတ်သည်။ အသက်ပင်ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါသည်။ ကုသမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် ဆရာဝန်များသည် လိုအပ်သောကုထုံးများကိုညွှန်ကြား၍Anti-viral ပိုးသတ်ဆေးများသုံးကာ ကုသလေ့ရှိသည်။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအနေဖြင့် မွေးကင်းစကလေးများနှင့် ရေကျောက်မပေါက်ဖူးသေးသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့အတွက် ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးများထိုးနိုင်ပါသည်။ ခါးပတ်ရေယုန်ကာကွယ်ဆေးများလည်း အသက်ကြီးသူများအတွက်ထိုးနိုင်ပါပြီ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့် 51% ထိ ခါးပတ်ရေယုန်ဖြစ်ပွားမှုကို လျှော့ချနိုင်ပါပြီ။ အသက် ၆ဝအထက်လူကြီးများအတွက်လည်း ကာကွယ်ဆေးများရှိနေပါသည်။
ဤဆောင်းပါးဖြင့် ခါးပတ်ရေယုန်နှင့်ပတ်သတ်၍ တော်တော်များများသင်သိနေပြီးဖြစ်ပါသည်ဟုယူဆပါသည်။ ရောဂါအခြေအနေအားလုံးကို နားလည်ထားခြင်းဖြင့် ခါးပတ်ရေယုန်ကို ကြောက်လန့်နေဖို့ မလိုအပ်တော့ပါဘူး။
ခါးပတ်ရေယုန် (Shingles) ဟာ ရေယုန်လိုမျိုး(Herpes) လိင်မှတဆင့်ကူးစက်နိုင်သောရောဂါလား? ခါးပတ်ရေယုန်ဆိုတာ Varicella-Zoster (VZV) လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ အရေပြားရောဂါတစ်မျိုးပြီး ရေကျောက်ရောဂါ (Chicekn pox)ကိုဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်အမျိုးတူအုပ်စုဖြစ်သည်။ ခါးပတ်ရေယုန် (Shingles) ဟာ ရေယုန်လိုမျိုး(Herpes) လိုမျိုး လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါမဟုတ်ပါဘူး။
User rating: 2.83 out of5with 12 ratings